Jerosalema - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Jerosalema
Valiny : 3
rhaj0 - 14/05/2018 16:29
Io moa izao no mahoraka @ geopolitika sy ny finoana izao. Jerosalema izany no renvohitr'Israely.
Ka ny fanontaniako dia:
- miray fo sy saina @ Palestiniana ve ohatra ny Kristiana gasy,
- sa, miray fo sy saina @ Trump sy Netanyahu?
Vabahao ny Baiboly ao, fa vabahao koa ohatra ity lahatsoratr'ity
rhaj0 - 16/05/2018 19:39
Mety TSY azon'ny Kristiana gasy angamba hoe, fa ilay "Jerosalema" hirahirainy lava io anie, ka tena misy, fa tsy hoe, tany imazinera, na "parabaolina" fotsiny, na hoe tany nisy fahagola tany fotsiny.
Ahoana tokoany moa no anavahan'ny Kristiana gasy ny imazinera sy ny tena nisy, raha ny saha Edena ohatra, matetika loatra, dia imaziner-ny ho imazinaire, nefa tena nisy tokoany koa: ao Irak ao ilay izy io izao.
Ka io izany ilay Jerosalema fa io lasa raisin'i Trump ho renivohitr'Israely io.
ka tena mba tiako ho fantatra ny eritreritry ny Kristiana gasy ny @ io ho'a..
- tena fahatanterahan'ny resa-Baiboly ve ity fivoaran'ny tantaran'i Jerosalema ity?
- sa, tena tsisy idiran'ny Baiboly sy ny Kristianisma io, fa resaka geopolitique 2018 fotsiny?
Inty soso-kevitro @ Kristiana gasy (tsara sitra-po) eto @ serasera eto:
1- Aza mi-triche, fa apetrao antsoratra mihikntsy aloha ny eritreritrao marina ny @ Jerosalema.
2- Dia vakio anie ity bilaogy iray ity
3- Dia eritrereto tsara indray ilay eritreritrao orijinaly ny @ Jerosalema
BENEM - 29/09/2018 08:02
Ny firenena rehetra dia samy manana ny fiainany sy ny renivohiny avokoa,amiko manokana antananarivo no renivohitra dia ampy ahy izay,any israel dia jerosalema,any frantsa paris,any japon tokyo,izay ihany ny ahy no andraisako azy.
rhaj0 - 29/09/2018 15:50
ka tsy hainao ilay tantara sy zava-misy, fa ny nasesiky ny israeiana ankehitro (ry Netanyahu moa izany eee) sy ny Mbaiboly no averinao, satria izay no (hany) raisinao ho marina sy rariny sy hitsiny... ary ataonao tsinontsinona ny (an'ny) hafa (palestiniana)
dia rehefa izay (foana) no reflexe-nao, satria voasasan-drizalahy @ tokony ho izy ao tsara ianao, dia ... na ny fiainanao sy ny tenanao azany dia ... "ataonao tsinontsinona", fa ny an-dry bilaondy o zieu bleu (foana) no indrahindrainao..